Hotel Receptionist | SKY Hotel ﻿
Company: SKY Hotel
The SKY HOTEL isaunique hotel in Hlaingtharyar township ,Yangon . It is easily accessible by public transportation from everywhere of Yangon area .
• ဧည့်သည်များအားပျူဌာစွာကြိုဆိုခြင်း ၊ ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
• ရုံး တွင်းလိုအပ်ချက်များကို Team Work စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ကူည်ီလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• ဆယ် တန်းအောင် မြင်ပြီး အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• ယဉ်ကျေးပျူဌာ စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
• အင်္ဂလိပ်စာ အ ခြေံခံ ပြောနိုင်ရမည်။
Work location 3/4 Shwe Kann Tharyar Housing , Near Thamagonegone Junction, Yangon-Pathein Road , Hlaingtharyar Township, Yangon
• အသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ • ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ • အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးနေ့/ညတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Security (KTV)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ Waiter (Hotel/KTV)
• ဧည့်သည်များအားပျူဌာစွာကြိုဆိုခြင်း ၊ ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ • ရုံး တွင်းလိုအပ်ချက်များကို Team Work စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ကူည်ီလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ • ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိုင်ရမည်။ Cashier (KTV)
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	LCCI Level II or III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည် •	ကွန်ပျူတာဖြင့် စာရင်းရေးဆွဲခြင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်� ...
•	ရုပ်ရည်အသင့်တင့်ရှိပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ Front Office Supervisor (Hotel)
•	လုပ်ငန်းခွင်တွင်အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Manager (KTV)
Hotel Receptionist Customer Service & Call Center Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon SKY Hotel Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Hospitality / Hotel Jobs in Myanmar, jobs in Yangon